အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ထင်ကျော် ● မာတုရက္ခိတ ကင်းမဲ့ရက်များ
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် - အပိုင်း (၂၇)
“ငြိမ်းချမ်းရေးက တရက်၊ တနာရီ နောက်ကျရင်တောင်မှ တိုင်းပြည်ကို သစ္စာဖောက်ရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်” (အင်တာဗျူး)
ခင်စန်းမေ - ကလေးစာပေပွဲတော်မှာ ငယ်ဖော်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်
မောင်မောင်စိုး ● လွမ်းရစ်ဝေသော နေ့များ ညများ ဘဝပေါင်းများစွာ - အပိုင်း (၃၇)
မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်းကို လေ့လာခရီး၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း - Zaw Aung
၀ိသေသ - တစ်ဦးတည်းသောသားကို ပြန်ရွေးဖို့
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ - ၁၉၈ဝ) - အပိုင်း (၅၈)
Join 88,820 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month October 2018 (135) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၇
● လူငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝချည်ထွေး (၃)
“စကားလုံးတွေဟာ အတွေးတွေကို ကောင်းကောင်းမဖော်ပြနိုင်ဘူး။ အတွေးကို စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြလိုက်ရင် နည်းနည်း ဖြစ် ဖြစ်၊ ကွဲပြားခြားနားသွားတယ်။ ငါတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အနက်အဓိပ္ပါယ် အရှုပ်အထွေးထဲမှာ၊ စကားလုံး ပဋိပက္ခတွေ ထဲမှာ ကျရောက်နေတာ တွေ့ကြရတယ်”
ဟာမန်းဟက်စ်ရဲ့ ‘သိဒ္ဓတ္တ’ ဝတ္ထုမှ …
ဒီကာလမှာ ကျနော့်ရဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပုံဟာ ဘယ်လိုဖော်ပြရမှန်းမသိဘူး။ တခါတလေ အတန်းမတက်ချင်ဘူး။ ဒါနဲ့ အ ဆောင်က သူငယ်ချင်းတွေ အခန်းထဲ သွားသွားအိပ်နေတယ်။ ကျောင်းမှာ စာပေဝါသနာပါတဲ့သူတွေ၊ ကဗျာရေး စာရေး လုပ်သူ နည်းနည်းပါးပါးနဲ့ စကားပြောတယ်။ ညနေစောင်းတော့ အိမ်ပြန်လာတယ်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာတော့ ၇၅ ကျပ်တန်၊ ၃၅ ကျပ်တန်နဲ့ ၁၅ ကျပ်တန်ငွေစက္ကူတွေကို တရားမဝင် တော့ဘူး၊ ဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုပြီး ကြေညာလိုက်တယ်။ အဲဒီညမှာပဲ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေ မကျေနပ်လို့ ဆူပူကြတယ်။ အစိုးရက ကျောင်းတွေပိတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျနော် ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတယ် မသိဘူး။ နောက် တနေ့ ကျနော် သီတာဆောင်ဆီ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ စုလှိုင်က ရှိမနေဘူး။ မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တော့ ငါ့ဆီမှာ ပိုက်ဆံနည်းနည်း ရှိ တယ်။ ငွေကြေး ခက်ခဲမလား။ အိမ်ပြန်ဖို့ စားရိတ်စကရော လိုမလားမေးမိတယ်။ တကယ်တော့ သူ့မှာလဲငွေမလိုပါဘူး။ ဒီတလော မျိုးမျိုးနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ သွားဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီကြားထဲမှာ ကျနော်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတယောက် မိန်းမခိုးလာပြီး၊ စက်မှုတက္ကသိုလ် (RIT) နောက်ဖက်က အပြင်ဆောင်တခုမှာ လာငှားနေကြတယ်။ ယောက်ျားလေးဖက်က ကျနော်တို့ မြို့က ရင်းတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သလို၊ မိန်းကလေးဖက်ကလည်း ကျနော်နဲ့သိတယ်၊ ရင်းနှီးတယ်။ မျိုးမျိုးကလည်း ကောင် မလေးဖြစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်း။ ဒါနဲ့ သွားအားပေးကြမယ်ဆိုပြီး တူတူသွားကြ လာကြ။ ကျနော်ကတော့ ရိုးရိုးသားသားပဲ။ ဒါပေမယ့် အချို့ကတော့ အမြင်တမျိုး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေကြမယ်။
ကိုယ့်ကိုမွေးတာ (၂၂) နှစ် ရှိပါပြီ။
ချည်မျှင်အပုံထဲက ကိုယ့်ဖက် ဆွဲချင်ရာဆွဲ
ကဗျာစတွေ ဟိုတေး၊ သည်တေး ချရေးမိတယ်။ ဘဝဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒီဘဝရဲ့ ပန်းတိုင်က ဘာလဲ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တွေ လျှောက်တွေးတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ စာအုပ်တွေနဲ့ ပင့်ကူတကောင်လို၊ ပိုးဟပ်တကောင်လို ပိတ်လှောင်နေရတဲ့ ဘဝကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်နေမိတယ်။ ဒီဆေးပညာက ကျနော်တကယ် စိတ်ဝင်စားရဲ့လား။ မိဘတွေက ပို့လို့ ဆယ်တန်း အောင်စဉ်မှာ ကျနော်အမှတ်ကောင်းလို့ ဆေးကျောင်းရောက်လာခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးမှ အခြားသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်စားနေတဲ့သူတွေကိုလည်း ကျနော်မြင်နေရတယ်။ ကျနော်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘဝက ဘယ်လိုပုံစံလဲ။ စသည်ဖြင့် မေးခွန်းကြီး တွေ ထုတ်မိတယ်။ ကျနော့်အသိ ကဗျာဆရာထဲက၊ ကျနော်တို့အပေါ်တန်းက ကိုသိန်းဝင်းဆိုရင် ဂျူတီကုတ်လုံးထွေး ဆေးရုံသွား၊ စီးတော့လည်း တာယာဖိနပ် ဘဝကို အရွဲ့တိုက်နေတာမျိုး မြင်ရတယ်။ ကျနော်ကတော့ အိမ်ကပြင်ဆင်ပေး လို့ ဂျူတီကုတ် မီးပူကျ သပ်သပ်ယပ်ယပ် ရှိပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ကိုယ်က စမ်းသပ်လေ့လာရမယ့် လူနာကိုလည်း ကိုယ့်အပြုအမူကြောင့် အားနာမိတယ်။ ကျနော်ဟာ အခြေခံဝမ်းစာ မရှိဘဲ သူ့ကို နားကျပ်ထောက် သိဟန်ဆောင်နေ တာလား။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဟိုနှိပ်သည်နှိပ် ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ လုပ်နေဦးမှာလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဆရာဝန်ဖြစ်အောင် တချက်ကြိုးစားလိုက် ပြီးတဲ့အခါ သက်တောင့်သက်သာဇုံ (confort zone) လေးတခုမှာ၊ ညနေမပျက်မကွက် ဆေးခန်းဝင် အတန်အသင့်ဝင်ငွေလေးနဲ့၊ (အထွေထွေကု) ဂျီပီနဲ့ ဘဝကို ဆက်မျောထားရမှာလား။ ဒီအချိန်မှာ ဆရာဝန်စာရေးဆရာ တွေရဲ့ “ငါ့ကို ရွှေအိုရောင် ညနေခင်းတွေပြန်ပေး” ဆိုတဲ့ အော်ငြီးသံ ဝတ္ထုတွေကိုလည်း ကျနော် ဖတ်နေရပြီ။ ရွှေအိုရောင် ညနေအလှတွေကို မြင်ခွင့်မရှိတော့ဘဲ ဆေးခန်းလေးဘက်နံရံမှာ ဝင်ငွေအတွက် ထောင်ကျခံနေရတဲ့ ဂျီပီဆရာဝန်ဘဝ တွေကို ပေါက်ကွဲထားကြတဲ့ အသံတွေ။
ဟုတ်တယ်။ ဘာတွေ မှားယွင်းဦးမှာလဲ။ ဒီကြားထဲမှာ ကျနော် ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိရာ မြို့ကလေးတခုကို သွားလည်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမြို့ကလေးရောက်တော့ ကျနော်က ဘကြီးတော်စပ်သူ အိမ်မှာတည်းတယ်။ အဲဒီမြို့ကလေးမှာပဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက သံယောဇဉ်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးတယောက်လည်း ရှိနေတယ်။ မိဘချင်းလည်း သိနေကြသူတွေ။ သူက ကျနော့် ကိုကြိုက်နေတာ သိပေမယ့်၊ ကျနော်ကတော့ သူငယ်ချင်းပဲ၊ ဒီထက်လည်း မပိုမိဘူး။ ကျနော်တို့ရောက်တော့ သူက လာလာခေါ်တယ်။ စက်ဘီးတစင်းမှာ ကျနော်က နင်း၊ သူက နောက်ကစီး။ ညနေ ညနေဆို အအေး ထွက်သောက်တယ်။ ပန်းဆီရောင်သန်းတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေတလျှောက် လေညင်းခံတယ်။ ဆားနံ့သင်းတဲ့ လေကိုရှူ ဟိုရောက်သည်ရောက် စကားတွေပြော၊ သဲသောင်ပြင်ပေါ် လျှောက်ကြတယ်။ ပင်လယ်ကြီးထဲ နေလုံးကြီး နီကျင်စွာ စုံးစုံးမြုပ်တဲ့အထိ ထိုင်ကြည့်၊ ပြီးတော့မှ ပြန်လာကြတယ်။ သူ့ကို အိမ်ပြန်ပို့၊ ကျနော်က ဘကြီးအိမ်ပြန်အိပ်။
ဒီသူငယ်ချင်းက နှစ်တိုင်း၊ နှစ်တိုင်း ဒိုင်ယာရီတအုပ် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က အဲဒီဒိုင်ယာရီ စာအုပ်တွေမှာ ကဗျာရေးတယ်။ ဟို သည်မှတ်တယ်။ အခြားကောင်မလေးတွေအကြောင်း ဖွဲ့နွဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်ပြန်တော့မယ့်ရက် ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူက စပြောလာတယ်။
“အောင်သူ… နင်နဲ့ ငါ အခုလို မြို့ထဲသွားလာနေကြတာ အမျိုးတွေကလည်း မေးလာကြတယ်။ မြို့ကလေး သေးသေးလေး။ အသိတွေကလည်း မေးကြတယ်။ ငါ ဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲ။ … နင့်ကိုငါ သံယောဇဉ်လည်း ရှိပါတယ်။ တချိန်ကျရင်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။” ကျနော် ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဘူး။
ကျနော့်မှာ အမျိုးသမီးကိစ္စတွေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်လုံးထွေး ရှုပ်ရှက်ခတ်နေရတာလဲ။ ကျနော် သူ့ကို သူငယ်ချင်းလိုပဲ သဘောထားတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်တယောက်လောက်ထိတော့ စိတ်ကူးလို့ကို မရသေးဘူး။ ကျနော် ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိလို့ အကြာကြီးတိတ်နေတယ်။ သူကလည်း နေဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့ ပင်လယ်တဖက်ခြမ်းကို ငေးနေခဲ့တယ်။ သဲသောင်ပြင် ကို လက်နဲ့ခြစ်နေတယ်။ ကျနော် သူ့မျက်နှာကိုလည်း မကြည့်ရဲဘူး။ လှိုင်းလုံးသံတွေဟာ အခုမှ ပိုကျယ်လောင်လာသလို ပဲ။ ကျနော်တို့ကြားထဲမှာ တိတ်ဆိတ်မှုက ပိုကြီးထွားလာတယ်။ အသက်ရှူသံတွေတောင် ကျယ်လောင်တယ် ထင်ရ လောက်အောင် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာ။ ဒါဟာ မကောင်းမှန်းလည်း ကျနော်သိတယ်။ ကျနော်တခုခုတော့ ဖြေရမယ်။ ကျနော် တခုခုတော့ ပြောရမယ်။
“မပြန်ချင်ဘူး” သူ ဖြေတယ်။
“မှောင်လာပြီ၊ ပြန်ကြရအောင်… ”
အကြာကြီး တိတ်ဆိတ်နေပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး ကျနော်ဘာတွေ ပြောမိမှန်းလည်း မသိဘူး။
“နင်လေ… တချိန် အိမ်ထောင်ဖက်စဉ်းစားတဲ့အခါ၊ ငါ့ကို မစဉ်းစားပါနဲ့ကွယ်။ ငါနင့်ကို သူငယ်ချင်းလိုပဲ သဘောထားလို့ ရ တယ်။ ငါ ခင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်…. “သူငိုနေသလား၊ ရှက်နေသလား။ မျက်လုံးမှာ မျက်ရည်ဝဲနေသလား ကျနော် မသိနိုင် ဘူး။ အလင်းရောင်က အတော် အားနည်းနေခဲ့ပြီ။ “ပြန်ကြရအောင်…” သူလေးလေးတွဲ့တွဲ့ ထလာတယ်။ ကျနော်တို့ အပြန် လမ်း စက်ဘီးနင်းလာတော့လည်း တယောက်နဲ့တယောက် စကားမဆိုဖြစ်ကြဘူး။ သူ့အိမ်ရောက်လို့ နှုတ်ဆက်တော့ သူဘာတခွန်းမှ မပြောတော့ဘူး။ အိမ်ပေါ်တန်းတက်သွားတယ်။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ကျနော့်အတွက် ပိုပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးလာခဲ့တယ်။ အူပေါက်နေတဲ့ ချည်တထွေးလိုပဲ။ အမယ် ဘုတ် ကယ် သူ့ချည်ခင် ဘယ်လိုရှင်းရပါ့လေး ဆိုသလိုပဲ။ စိတ်ထဲမှာ ပလာကျင်းနေတယ်။ မိတ်ဆွေ…. ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ပလာကျင်း၊ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်ဖူးပါသလဲ။ လူတွေဟာ စိတ်ပလာကျင်းမှုကို မခံမရပ် နိုင်လို့ တခုခုနဲ့ ဖြေသိမ့်ကြရတယ်။ ဆေးလိပ်ကို နာနာဖွာတယ်။ အရက်သောက်လို့ မူးသွားရင် စိတ်ပလာကျင်းတာ ပြေ မလား၊ အကုန်မေ့ အိပ်ပျော်သွားမလားထင်လို့ သောက်တယ်။ စိတ်ပလာကျင်းမှုကြောင့် လူတွေ ဖုန်းကို ဟိုပွတ် သည်ပွတ်နဲ့ နေတယ်။ ငါ့ကို တယောက်ယောက် ဆက်သွယ်လာလေမလား။ စိတ်ပလာကျင်းမှုကို ဖြေသိမ့်ဖို့ အချို့က တရားထိုင်တယ်။ အချို့က ပုတီးစိတ်တယ်။ အချို့ကတော့ စိတ်ပလာကျင်းမှုကို ဖြေဖျောက်ဖို့ မူးယစ်ဆေးဝါးတောင် သုံးစွဲကြတယ်။ ငိုချလိုက် ကြတဲ့ သူမျိုးလည်း ရှိမှာပေါ့။ လူတွေ ရှင်သန်ကြတာ အခိုက်အတန့်လေး။ အဲဒီမှာ ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့ မုန်းတီးခြင်းက နေ့နဲ့ညလို၊ လင်းလိုက်မှောင်လိုက် ရှိမှာပေါ့။ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းတွေကလည်း ဘဝတွေကို တွယ်ငြိ ရစ်ပတ်၊ တုတ်နှောင်တတ်တာပေါ့။ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုတွယ်ငြိဖွယ်ရာကို ရှာကြရမလဲ။ စိတ်တွင်း ပလာကျင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ တခုခုကို ဆုပ်ကိုင် တွယ်ငြိနေဖို့ လိုအပ်ပါသေးသလား။ လူတွေမှာ ရုပ်ဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့၊ စိတ်အတွေး အာရုံ ၆ ပါးတွေနဲ့ လှုပ်ရှား နေကြရတယ်။ ဒီအပေါ်မှာပဲ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟတွေ ဖြစ်ကြရတယ်။ ကျနော်တို့ ဆင်ခြင် မစိစစ်နေနိုင်ဘူး။ ဉာဏ်ပညာနဲ့ ယှဉ်ပြီး မကြည့်နိုင်ကြဘူး။
မျက်စိ၊ နား၊ ပါးစပ်များ
တွေ့ မြင် သိ နေ။
ငါ ဘာကို မုန်းရမလဲ
ငါ ဘယ်သူ့ကို သတ်ဖြတ်ရမလဲ
ငါ ဘယ်သူ့ခြေ လျှက်ရမလဲ။
ကျနော် ကျောင်းပြန်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်တွေ့တယ်။ သတင်းတခုက ကျနော့်ရင်ဝကို လှုတ်ခတ်စေတယ်။ Field Trip အပြီး ပြန်လာလို့ စုံတွဲဖြစ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတဆင့်၊ သီတာဆောင်ရဲ့အတွင်းရေးတွေ ပေါက်ကြားလာ တာ။ ဘယ်လောက် မှန်ကန်တယ်၊ မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူး။
“ဟေ့ကောင်၊ ကြည့်လုပ်ဦး၊ မင်း … ဘာရှုပ်ထားတာလဲ။ မျိုးမျိုးနဲ့ စုလှိုင် တယောက်နဲ့တယောက် စကား မပြောမဆို ဖြစ် နေ ကြပြီ ပြောတယ်။ “ဘာဖြစ်လို့လဲ။ သူလည်း သေချာမသိပါဘူး။ “မင်းက ငရှုပ်ပဲ၊ ငါးနှစ်ကောင်တော့ မဖမ်းပါနဲ့ကွာ”
ကျနော် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နက်ဖြန် ကျနော် စုလှိုင်ကို ရည်းစားစကား ပြောတော့မယ်။
(အရာရာဟာ အစက ပြန်စလို့ရတော့မယ့်အတိုင်း)
(အောင်ချိမ့်) ၈၇၊ ဧပြီ
(ဘဝ၏ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်… မှ)